1786s Hans Rey &amp; Martin Maes - 4K မှ TransHongKong Urban MTB စွန့်စားမှု images and subtitles
တရုတ်အသံ ငါ Hans Rey ဟာအရင်ကကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့တောင်တက်သမားပေါ့ freeride နှင့်လှူဒါန်းမှုဘီး4ဘဝတည်ထောင်သူ၏။ ငါ့မြို့ပြတောင်ကြီးတောင်ငယ် စွန့်စားခန်းစီးရီးသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြို့အချို့တွင်စီးနင်းခြင်းကိုပေါင်းစပ်ထားသည် လှပသောသဘာဝနှင့်ဝိုင်းရံထားသည် သဘာဝနှင့်သဟဇာတပရမ်းပတာများနှင့်မြို့ပြတောတွင်းအကြား။ Trans Angeles မြို့နှင့် Trans Napoli၊ Trans Hong Kong သည်လာမည့်လာမည့်အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးသောစွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည် လာမယ့်ငါးရက်အကြာမှာငါနဲ့အတူလာပြီးငါနဲ့အတူဟောင်ကောင်ကိုစူးစမ်းပါ အားလုံးယနေ့ဒီနေ့ Trans ဒီမှာဟောင်ကောင်မြို့ပြစွန့်စားမှုထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ငါဒီမှာ ကျားနှင့်အတူဟောင်ကောင်၏မြောက်ဘက်ရှိနယ်မြေများအသစ်ထို့ကြောင့်သူသည်ဒေသခံမြင်းစီးသူရဲကိုဖြစ်ပါတယ် သူဟာပထမနေ့နဲ့ကျန်တဲ့တစ်ပတ်တည်းမှာပဲသူနဲ့ဒီနေ့ငါလာမယ် အချို့သောအခြားဒေသခံမြင်းစီးသူရဲများနှင့်တ ဦး တည်း -and- မာတင် Maes တို့ကပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။ ငါငယ်ငယ်တုန်းကမင်းရဲ့ဗီဒီယိုမျောက်ကိုတွေ့ခဲ့တာကိုယနေ့ငါနဲ့အတူစီးနင်းလိုက်ပါပြီ monkey do 'အိုး။ ဒါကအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ငါစမ်းသပ်မောင်းနှင်တဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့တောင်ကြီးကိုစက်ဘီးစီးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ဗီဒီယိုအဟောင်းကိုကြည့်ရတာဘယ်လိုလဲ။ နယ်မြေအသစ်များတွင် ရည်ရွယ်၍ တည်ဆောက်ထားသောတောင်တက်စက်များရှိသည် သစ်တောနှင့်လှပသောသဘာ ၀ သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ဤခရိုင်ဖြစ်သည် Kowloon မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးတရုတ်နယ်စပ် gentrification နှင့်နီးသည် နေရာတိုင်းမှာဟောင်ကောင်ဟာကြီးမားလွန်းတယ်၊ ခုထက်ခုနစ်ခုကျော်သွားပြီလို့မင်းစဉ်းစားတယ် လူ ဦး ရေသန်းချီသည်ဤနေရာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ချဲ့ထွင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် နယ်မြေအသစ်များသည်မြောက်ပိုင်းတွင်မြို့ကြီးများနှင့်တိုးတက်မှုများကိုကျေးဇူးတင်စွာပေါ်ပေါက်စေသည် စိမ်းလန်းစိုပြေရေးနေရာများစွာကိုတစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေရသည်။ မဆိုးပါဘူး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Trans ဟောင်ကောင်မှစတင်ပါ။ အလွန်လှပသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောတောင်ကြီးစက်ဘီး လမ်းကြောင်း ဒီဟာကဒီမှာအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလိုလား? မှန်ပါတယ် ဒီမှာများစွာသောအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်း။ yeah နောက်မှ Tin Man ကိုငါတို့စီးမယ် yeah အလွန်ကောင်းတယ် - ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် အားလုံးဟောင်ကောင်ရှိတယ်။ လူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဲဒါကြောက်စရာကောင်းတယ် မနက်ဖြန်ဟောင်ကောင်စီးနေပြီလား yeah ငါတို့လိမ့်မယ် မြို့ပြတောတွင်း ဒီနေ့ငါမာတင်မဲစ်နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာတောင်ကြီးတောင်ငယ်တွေကိုလမ်းလျှောက်သူတွေ၊ Kowloon ၏ရပ်ကွက်အတွင်း ကျဉ်းမြောင်းသောကျောရိုးတစ်လျှောက်တစ် ဦး ပင်ပန်းနှင့်သစ္စာဖောက်အနီး - ဒေါင်လိုက်တိုးမြှင့် အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံသည့်လမ်းတစ်လျှောက်သင့်နောက်ကျော၌စက်ဘီးဖြင့်အမှတ်ရရန် တကယ့်ကိုဖော်ရွေတဲ့ chatty ဒေသခံတွေကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေရော၊ အားလုံးစကားမပြောနိုင်သောစက်ဘီးပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုသက်သေခံရန်တည်ထောင်ခဲ့သည် ၎င်းသည် Kowloon တွင်အမြင့်ဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မြို့ရဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းများကိုသင်အနည်းငယ်ရနိုင်သည် အတော်လေးစိမ်းလန်းစိုပြေသောကျွန်းများမှသည်ဟောင်ကောင်၏မတူကွဲပြားမှု၏ရှုထောင့် မြို့၏ Kowloon ၏ဖရိုဖရဲဖြစ်မှုသည်အထက်မှပေါ်ထွက်လာသည့်မြေကွက်အကျယ်အ ၀ န်းရှိသောအဆောက်အအုံများသို့ဖြစ်သည် ဖြစ်နိုင်သည်ထင်ဟပ် monolithic မိုးမျှော်တိုက်မှနယူးနယ်မြေများအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြား Selfie စွဲစွဲသူများအတွက်နံပါတ်တစ်အစက်အပြောက်ကဘယ်လောက်များများအံ့သြခဲ့သလဲ အနှစ်တစ်ထောင်သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဓာတ်ပုံရိုက်ယူအစွန်းပေါ်တွင်ရပ်နေ၏ ထပ်ခါထပ်ခါရှင်းရှင်းလင်းလင်း instagram မျိုးဆက်အတွက်လေးနက် pastime ငါတို့လမ်းများကိုဖြတ်ပြီးငါတို့ဗုံးကြဲနေတဲ့ Kowloon စီးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဆင်းသွားခဲ့တယ် ကမ်းခြေအထိလူအစုအဝေးကိုရှောင်တိမ်းနေခြင်း။ ကောင်းသောဒေသခံရှာဖွေတွေ့ရှိ ကျွန်တော်တွေ့သည့်ကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုမှ ဖြတ်၍ စက်ဘီးဖြင့်အစာသည်ကျွန်ုပ်၏ခရီးစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် မုန့်ဖုတ်အရသာကြည့်ရှုသောအရာနှင့်အတူစည်အဆိုပါစင်ပေါ်ကွာ tucked ဒါကမာတင်ကိုသူသေချာစားနိုင်တယ်လို့ပြုံးလိုက်တယ် မြောက်ဘက်ပိုင်းသည်ရိုးရာ Kowloon ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများပိတ်ဆို့သကဲ့သို့ဖြစ်သည် စျေးကွက်တွေဆိုရင်နီယွန်ကငါတို့နားမလည်တဲ့အရာတွေကိုကြော်ငြာတယ်။ ငါတို့ လူစုလူဝေးနှင့်ထူးဆန်းသောရနံ့နှင့်အသံအတွက်ယူပြီးအသွားအလာရှောင် ဆူညံသံပြင်းထန်ပြီးဘယ်တော့မှမရပ်တန့်ပါ ကျွန်တော်တို့ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ဆွန်းစတုရန်းပုံသဏ္builtာန်အဖြစ်တည်ဆောက်ထားတဲ့တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံတစ်ခုကိုလည်ပတ်ခဲ့တယ် အတွင်းပိုင်း quad ကတော့ကြမ်းပြင်တွေမြင့်တက်လာတယ် ကလေးများနှင့်အတူတကွစုပေါင်းနေထိုင်သည့်အမျိုးသမီးအုပ်စုများကကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည် ခိုင်မာသောကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်သူတို့ကအိမ်ဖော်များဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည် သူတို့ရဲ့ချိုးယူပြီးအထက်တိုက်ခန်းများမှတိုက်ခန်းများအလွန်သေးငယ်သောနှင့်လိုရှိ၏ များစွာသောမိသားစုများအတွက်မျိုးဆက်သုံးဆက်ခွဲထားလေ့မရှိ ထိုအိမ်များ၌အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများသည်မိသားစု ၀ င်တိုင်းအတွက်လုံလောက်သောအခန်းမရှိ တစ်ချိန်တည်းမှာအိပ်ပါ ယခု Kowloon အနေဖြင့်လေဆိပ်ဟောင်းကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ပိုက်ဆံအတွက်ဗဟိုပြေးပြေးနေသည် ဝေးသစ်ကိုဆိပ်ကမ်းနှင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေနှင့်အတူအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်နေရာအသစ်သို့ တောက်ပသောအဆောက်အအုံများသည်မြင့်တက်လာပြီးစူပါ၏ထင်ဟပ်ချက်များကိုထင်ဟပ်ပြသခြင်းဖြစ်သည် ရွက်လှေကိုရေပေါ်မှာ bobbing ဒီဟာကငါ့ဘဝမှာအထင်ရှားဆုံးမြို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် ဒီမှာပိုက်ဆံဘဏ်တွေအာမခံကုမ္ပဏီများသည်ကြော့စျေးဆိုင်အတွက်ရွေ့လျားနေသည်နှင့် ပန်း ဦး ရစ်သရဖူကိုအတွက်ရတနာအဆိုပါ switzy ဟိုတယ်များမှာ ritz-Carlton ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာသည်ဤမြို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိအမြင့်ဆုံးအဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည် ကောင်းကင်တွင်မိုးမျှော်တိုက် ၇,၀၀၀ နှင့်အမြင့်ဆုံးမိုးမျှော်တိုက်များဖြစ်သည် ကမ္ဘာကြီး အလွန်အလုပ်များအလွန်ဟောင်ကောင် ညစာစားပြီးနောက်အိမ်အပြင်ကိုထွက်သွားပြီး၊ ကျိုးပဲ့နေသောဖန်မျက်နှာဖုံးများနှင့်ဖန်ခွက်များပြတ်တောက်နေသည့်ဖန်ခွက်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် ညဥ့်အခါဆန္ဒပြပွဲဖြိုဖျက်ဥ of ၏မဆုတ်မနစ် cacophony ကျနော်တို့အဲဒီမှာရှိနေစဉ်တက်တိုးပွားလာဆန္ဒပြပွဲများကျပန်းအားလုံးပေါ်လာ အရပျကိုကျော် Ridley Scott ရုပ်ရှင်ထဲကနေမြင်ကွင်းတစ်ခုနဲ့တူတစ်ခုခုဒါပေမယ့်ဒီဖြစ်ခဲ့သည် ဟောင်ကောင်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာငါတို့ဒီမှာရှိကောင်းရှိမယ်။ နည်းနည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ် ဟောင်ကောင်အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲသွား လူတော့ Lantau မှာတောင်ကြီးတောင်မရှိဘူး။ yeah နှင့်အချို့သောကောင်းတဲ့အမြင်များ, ဒါပေမယ့်ရဲ့ကြကုန်အံ့ အဆိုပါလမ်းကြောင်းထွက်စစ်ဆေးပါ။ အားလုံးကောင်းပြီဒါကိုလုပ်ကြရအောင် ဟောင်ကောင်ကျွန်း၏အနောက်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ဟောင်ကောင်အသစ်၏နေအိမ်ဖြစ်သည် Kong အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Lantau ကိုလည်း Disneyland ၏အိမ်အဖြစ်လူသိများသည် ဒေသခံလမ်းကြောင်းတည်ဆောက်သူများသည် Disneyland ကိုလက်တွေ့ကျကျဖန်တီးခဲ့ကြသည် ယနေ့တောင်တက်သမားများသည်ဤရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောလမ်းကြောင်းများနှင့်စူးစမ်းရန်ဖြစ်သည် ကုန်ပစ္စည်းများစမ်းသပ်ပါ ကောင်းစွာကျနော်တို့ဒီမှာအသစ်စုပ်စက်လမ်းကြောင်းကိုရိုက်ကြပြီ။ နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် ဤသည်မာတင်ဤ HM ဖြစ်ပါတယ်။ HM သည်အဓိကဖြစ်သည် သူသည်အာရှတွင်လမ်းကြောင်းများတည်ဆောက်ရန်စင်ကာပူမှလာသူဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည် Dirt Traction တွင်အလုပ်လုပ်သောဟောင်ကောင်လမ်းကြောင်းအားလုံးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူသည် IMBA နှင့်လူရွှင်တော်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ မင်းကိုဒီမှာရှိနေတာဝမ်းသာတယ် ဟုတ်တယ်၊ မင်းဒီကိုဘာရောက်သွားတာအံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ uh ဒါကစက်ဘီးဥယျာဉ်သစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျေးလက်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ် ဒီမှာရှစ်ကီလိုမီတာလမ်းကြောင်း, ပုဒ်နှင့်လူငယ်areaရိယာစုပ်စက်အချို့တိုးတက်သော လိုင်းများနှင့်အဘို့အတိုးတက်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်တိုင်းပြည်လမ်းကြောင်း မျိုးဆက်သစ်မြင်းစီးသူရဲ။ ရပါတယ် လမ်းကြောင်းစုံတွဲတစ်တွဲစီးပြီးတော့ကျနော်တို့အလယ်၌အံ့သြဖွယ်အရက်ဆိုင်လမ်းကြောင်းကိုမြင်တော်မူ၏ ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့စုပ်စက်လမ်းကြောင်းကိုမြင်ရတာခင်ဗျားသိတာကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် သူတို့ကအရမ်းကိုလူကြိုက်များလာပြီ၊ အခုသူတို့ကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နေရတယ် ဒီတော့ yeah ကကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည် များစွာသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့များသည် Lantau အပါအဝင်ဟောင်ကောင်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည် တောင်တက်စက်ဘီးလမ်းကြောင်းများပိုမိုတည်ဆောက်ရန်ဤareaရိယာသည်မယုံနိုင်စရာသဘာဝရှိသည် နှင့်လမ်းကြောင်းကမ္ဘာ့အဆင့်မီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကကျိန်းသေအကောင်းဆုံးစီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကြည့်ရှုသည် ငါတို့သည်ဤရက်သတ္တပတ်လုပ်ဖို့တယ် Chi Ma Ma Wan လမ်းကြောင်းရဲ့အဆုံးမှာတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖုန်မှုန့်တွေကိုငါတို့ဆေးကြောတယ် တရုတ်ပင်လယ် နံနက် ၄ နာရီတွင်နံနက်စာစားချိန်တွင်ဆန္ဒပြမှုများပိုမိုများပြားလာသည်ကိုတီဗွီတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည် အထူးသဖြင့်ယနေ့ငါတို့စီးရန်သတ်မှတ်ထားသောဟောင်ကောင်အလယ်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည် အလွန်သတိထားရန်နှင့်အစက်အပြောက်များကိုရှောင်ရှားရန် နစ်ခ်ဒိုဗာအားဟောင်ကောင်တစ်လျှောက်လှည့်လည်ကြည့်ရှုရန်ဒေသခံလမ်းညွှန်တစ်ခုနှင့်တွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့နီးကပ်နေပြီ ကျွန်းကိုငါတို့ရထားကိုငါတို့အစည်းအဝေးအမှတ်သို့သွားနေကြသည် အလုအယက်နာရီမက်ထရိုမဟုတ်ဘဲစွန့်ပုံရသည် မကောင်းသည်နိမိတ်လက္ခဏာ - နံနက် ဟေ့ နေကောင်းလား မင်းကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ မင်းကဟောင်ကောင်ကိုသွားဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ သွားကြရအောင် ပင်လယ်အော်အကြားတွင်ကျော်ကြားသောကြယ်ကူးတို့ပေါ်မှကြယ်တစ်လုံးရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားရှင်းပြသည် ဆန္ဒပြမှုများနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက်အထူးအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည် ဒုက္ခထဲကနေနိုင်ဘူး ငါတို့ဟောင်ကောင်ကျွန်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာအများကြီးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတွေ့နိုင်တယ် အခု yeah ဒါရဲ့ကြိုးစားရှောင်ရှားကြကုန်အံ့နှင့်မျှော်လင့်ကောင်းတဲ့လွယ်ကူသောရှာပါ အထွတ်အထိပ်သို့သွားသောလမ်းကြောင်းသည်ကောင်းသောဖြစ်သင့်သည် မာတင်သည်ဤအရာတစ်ခုကြိုးစားကြည့်ပါ အဲ့ဒါဘာလဲ? wow တစ်ခုစမ်းကြည့်ပါ ဦး တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင်ဘာသာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကအဓိကကျသည် ဥယျာဉ်၊ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးဥယျာဉ်များနှင့်ဥယျာဉ်များရှိနေရာအားလုံးတွင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသည် သင်တန်းရှေးဟောင်းတရုတ်ဆေးပညာ၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုများအတွက်ဒဏ္isာရီဖြစ်ပါတယ် လမ်းများနှင့်တောင်ကုန်းများသည်ဘုရားကျောင်းများနှင့်အလွန်သေးငယ်သောအရာများဖြစ်သည် ရုပ်ပုံသို့မဟုတ်ရုပ်ထုနှင့်နံ့သာပေါင်းများကိုအခြားသူများကကြီးမားပြီးပြသကြသည် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအရောင်နှင့်အစဉ်အလာ၌မျက်နှာဒီအဘယ်ကြောင့်နှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပေလိမ့်မည် ဟောင်ကောင်မှနေထိုင်သူများသည်အသက် ၈၇ နှစ်နှင့်အမျိုးသား ၈၂ နှစ်တို့ဖြစ်ကြသည် နှင့်မြို့ဒါညစ်ညမ်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာရောထွေးသောအချက်ကိုရှိနေသော်လည်း လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူအသက်ရှည်ဘို့လှည့်ကွက်ပါဘူး Victoria Peak သည်ဟောင်ကောင်ကျွန်းရှိရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများရှိသောအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုကျော်ပြီးဒီဟာကအလုပ်များတဲ့လမ်းတွေအောက်မှာငါတို့လမ်းကိုသွားနေတယ် လှေကားထစ်များနှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောလမ်းကြားများကိုရပ်နားသည့်တောင်ထိပ်များမှ ဟောင်ကောင်အလယ်ပိုင်းရှိ Soho ဟုလူသိများသောရပ်ကွက် ဒီတော့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ၊ ဒါဆိုငါတို့ထူထဲသွားပြီ Des Voeux လမ်းမကြီးအနောက်တစ်လျှောက်တွင်ရှိသည့်စီးပွားရေးအချက်အချာကျသောနေရာတွင်ရောက်ရှိခဲ့သည် လမ်းပေါ်မှာအပျက်အစီးတွေရှိနေတဲ့တချို့ Raptor တွေကမျက်ရည်ယိုဗုံးတွေကိုတွန်းအားပေးစေတယ် ဆန္ဒပြသူတွေကရဲတွေအများကြီးကိုရဲတွေလာတွေ့တယ် ငါအဲဒီမှာသွားဖို့ကအရမ်းပညာရှိမဟုတ်ထင်ပါတယ်မြို့၏ထိုအပိုင်းကိုကြိုးစားရှောင်ရှားပါ ဒါကြောင့်သူတို့ရိုက်ကူးနေတဲ့အတော်လေးလေးနက်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်ရောထွေးပါ ရာဘာကျည်ဆန်များသည်သူတို့ရှိသည့် SWAT အဖွဲ့ရှိသည် လူတွေအရမ်းပြေးနေကြတဲ့လမ်းတွေမှာအမှိုက်တွေနဲ့အမှိုက်သရိုက်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် လျင်မြန်စွာအဲဒီမှာကျွန်တော်အခုဒီမှာမှထွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထင်ပါတယ် ဒီမှာတံတားတက်သွားရအောင်၊ မစောင့်ပါနဲ့၊ သွားမသွားရဲ၊ ရဲတွေရှိနေပြီ။ အင်းအဲဒီမှာမသွားပါစေနဲ့ အနည်းငယ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစုံတွဲတစ်တွဲဘဝကသာမန်လူတွေကဆိုင်ကိုစားသောက်ကြတယ် ငါတို့လှပသောဆင်ဖိုနီကိုကြည့်နေစဉ်အခြားတစ်ရက်ကဲ့သို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ of the Lights of the မိုးမျှော်တိုက်များနှင့်ဒေသခံအစားအစာများကိုအလိုလိုက်ခြင်းကိုပြသည် ကျနော်တို့ Lamma ကျွန်းမှာငါတို့ဒေသခံတစ် ဦး ပြသရန်ရောက်လာရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည် သငျသညျန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ကို yeah လာမယ့်အဘို့အကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ရပါမည် အပြင်ထွက် မင်းဒီမှာဒီမှာအချိန်ပြည့်နေတယ် အိမ်ကနေအဆင်ပြေစွာသွားစီးနိုင်တယ် Lamma ကျွန်းသည်ဟောင်ကောင်နှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည် ကားတွေမရှိဘူး လူတွေကစက်ဘီးစီးတာ၊ လမ်းလျှောက်တာတွေလုပ်တာကစက်ဘီးစီးတာကိုကြည့်ရတာထူးဆန်းနေတယ် လူများသည်တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်၌ကူးတို့သယ်ဆောင်လာပြီးသူတို့၏မြို့တော်အဝတ်အစားများ၊ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာသင်မြင်နိုင်ပါတယ် ကျွန်းသည်မိနစ် ၂၀ မျှကူးတို့ဖြင့်ဆွဲဆောင်နိုင်သဖြင့်သင်ဆူညံနေသောဆူညံသံကိုချန်ထားနိုင်သည် နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တိတ်ဆိတ်အတွက် kickback နောက်ကွယ်မှပြည်မ၏ညစ်ညမ်းမှု။ Lamma ဖြစ်ခဲ့သည် ထိုအချိန်မှစ၍ ဟောင်ကောင်ဒေသရှိတောင်ကြီးတောင်ငယ်၏စက်ဘီးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် ပြီးတော့ဒီလက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်စီးနင်းနိုင်သောနေရာများစွာရှိသည် လမ်းကြောင်း ကောင်းပြီ၊ အန်ဒီ၊ မာတင်ကောင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက် Trans Hong တစ်ယောက် စာအုပ်ထဲတွင် Kong - စာအုပ်၌ Trans Hong Kong ကိုဘီယာတစ်ခွက်နဲ့ကုန်အောင်ပြီးရင်တောင်ဘက်ကနေတွေအရည်ပျော်သွားတာကိုကြည့်နေမိတယ် China Sea သည်မမေ့နိုင်သောမြို့ပြစွန့်စားမှုတစ်ခုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနိဂုံးဖြစ်သည် Starbucks သည်၎င်း၏လုံခြုံရေးနှင့်ဆန္ဒပြမှုများကိုအရှိန်မြှင့်တင်လိုက်သည် အိုးသင်အသစ်ကစပွန်ဆာ Carmen ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Hans Rey &amp; Martin Maes - 4K မှ TransHongKong Urban MTB စွန့်စားမှု
< start="2.36" dur="5.14"> တရုတ်အသံ >
< start="23.42" dur="6.16"> ငါ Hans Rey ဟာအရင်ကကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့တောင်တက်သမားပေါ့ >
< start="29.58" dur="5.159"> freeride နှင့်လှူဒါန်းမှုဘီး4ဘဝတည်ထောင်သူ၏။ ငါ့မြို့ပြတောင်ကြီးတောင်ငယ် >
< start="34.739" dur="4.441"> စွန့်စားခန်းစီးရီးသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြို့အချို့တွင်စီးနင်းခြင်းကိုပေါင်းစပ်ထားသည် >
< start="39.18" dur="3.93"> လှပသောသဘာဝနှင့်ဝိုင်းရံထားသည် >
< start="43.11" dur="6.359"> သဘာဝနှင့်သဟဇာတပရမ်းပတာများနှင့်မြို့ပြတောတွင်းအကြား။ Trans Angeles မြို့နှင့် >
< start="49.469" dur="5.221"> Trans Napoli၊ Trans Hong Kong သည်လာမည့်လာမည့်အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးသောစွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="54.69" dur="11.02"> လာမယ့်ငါးရက်အကြာမှာငါနဲ့အတူလာပြီးငါနဲ့အတူဟောင်ကောင်ကိုစူးစမ်းပါ >
< start="68.93" dur="6.49"> အားလုံးယနေ့ဒီနေ့ Trans ဒီမှာဟောင်ကောင်မြို့ပြစွန့်စားမှုထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ငါဒီမှာ >
< start="75.42" dur="5.729"> ကျားနှင့်အတူဟောင်ကောင်၏မြောက်ဘက်ရှိနယ်မြေများအသစ်ထို့ကြောင့်သူသည်ဒေသခံမြင်းစီးသူရဲကိုဖြစ်ပါတယ် >
< start="81.149" dur="4.561"> သူဟာပထမနေ့နဲ့ကျန်တဲ့တစ်ပတ်တည်းမှာပဲသူနဲ့ဒီနေ့ငါလာမယ် >
< start="85.71" dur="4.979"> အချို့သောအခြားဒေသခံမြင်းစီးသူရဲများနှင့်တ ဦး တည်း -and- မာတင် Maes တို့ကပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။ >
< start="90.689" dur="6.96"> ငါငယ်ငယ်တုန်းကမင်းရဲ့ဗီဒီယိုမျောက်ကိုတွေ့ခဲ့တာကိုယနေ့ငါနဲ့အတူစီးနင်းလိုက်ပါပြီ >
< start="97.649" dur="7.08"> monkey do 'အိုး။ ဒါကအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ငါစမ်းသပ်မောင်းနှင်တဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့တောင်ကြီးကိုစက်ဘီးစီးလိုက်တယ်။ >
< start="104.729" dur="4.011"> ကျွန်တော့်ဗီဒီယိုအဟောင်းကိုကြည့်ရတာဘယ်လိုလဲ။ >
< start="136.37" dur="4.3"> နယ်မြေအသစ်များတွင် ရည်ရွယ်၍ တည်ဆောက်ထားသောတောင်တက်စက်များရှိသည် >
< start="140.67" dur="4.98"> သစ်တောနှင့်လှပသောသဘာ ၀ သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ဤခရိုင်ဖြစ်သည် >
< start="145.65" dur="4.44"> Kowloon မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးတရုတ်နယ်စပ် gentrification နှင့်နီးသည် >
< start="150.09" dur="4.38"> နေရာတိုင်းမှာဟောင်ကောင်ဟာကြီးမားလွန်းတယ်၊ ခုထက်ခုနစ်ခုကျော်သွားပြီလို့မင်းစဉ်းစားတယ် >
< start="154.47" dur="4.53"> လူ ဦး ရေသန်းချီသည်ဤနေရာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ချဲ့ထွင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် >
< start="159" dur="6.42"> နယ်မြေအသစ်များသည်မြောက်ပိုင်းတွင်မြို့ကြီးများနှင့်တိုးတက်မှုများကိုကျေးဇူးတင်စွာပေါ်ပေါက်စေသည် >
< start="165.42" dur="4.83"> စိမ်းလန်းစိုပြေရေးနေရာများစွာကိုတစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေရသည်။ မဆိုးပါဘူး >
< start="170.25" dur="5.909"> ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Trans ဟောင်ကောင်မှစတင်ပါ။ အလွန်လှပသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောတောင်ကြီးစက်ဘီး >
< start="176.159" dur="2.33"> လမ်းကြောင်း >
< start="189.49" dur="3.88"> ဒီဟာကဒီမှာအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလိုလား? မှန်ပါတယ် >
< start="193.37" dur="6.89"> ဒီမှာများစွာသောအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်း။ yeah နောက်မှ Tin Man ကိုငါတို့စီးမယ် >
< start="201.16" dur="4.74"> yeah အလွန်ကောင်းတယ် - ဟုတ်တယ် >
< start="231.5" dur="32.709"> ဟုတ်တယ် >
< start="270.78" dur="7.89"> အားလုံးဟောင်ကောင်ရှိတယ်။ လူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="278.67" dur="3.57"> အဲဒါကြောက်စရာကောင်းတယ် မနက်ဖြန်ဟောင်ကောင်စီးနေပြီလား yeah ငါတို့လိမ့်မယ် >
< start="282.24" dur="3.32"> မြို့ပြတောတွင်း >
< start="336.14" dur="5.32"> ဒီနေ့ငါမာတင်မဲစ်နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တယ် >
< start="341.46" dur="3.75"> ကမ္ဘာပေါ်မှာတောင်ကြီးတောင်ငယ်တွေကိုလမ်းလျှောက်သူတွေ၊ >
< start="345.21" dur="5.18"> Kowloon ၏ရပ်ကွက်အတွင်း >
< start="356.29" dur="4.62"> ကျဉ်းမြောင်းသောကျောရိုးတစ်လျှောက်တစ် ဦး ပင်ပန်းနှင့်သစ္စာဖောက်အနီး - ဒေါင်လိုက်တိုးမြှင့် >
< start="360.91" dur="6.63"> အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံသည့်လမ်းတစ်လျှောက်သင့်နောက်ကျော၌စက်ဘီးဖြင့်အမှတ်ရရန် >
< start="367.54" dur="4.65"> တကယ့်ကိုဖော်ရွေတဲ့ chatty ဒေသခံတွေကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေရော၊ >
< start="372.19" dur="4.52"> အားလုံးစကားမပြောနိုင်သောစက်ဘီးပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုသက်သေခံရန်တည်ထောင်ခဲ့သည် >
< start="377.82" dur="4.51"> ၎င်းသည် Kowloon တွင်အမြင့်ဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="382.33" dur="5.79"> အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မြို့ရဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းများကိုသင်အနည်းငယ်ရနိုင်သည် >
< start="388.12" dur="4.23"> အတော်လေးစိမ်းလန်းစိုပြေသောကျွန်းများမှသည်ဟောင်ကောင်၏မတူကွဲပြားမှု၏ရှုထောင့် >
< start="392.35" dur="5.52"> မြို့၏ Kowloon ၏ဖရိုဖရဲဖြစ်မှုသည်အထက်မှပေါ်ထွက်လာသည့်မြေကွက်အကျယ်အ ၀ န်းရှိသောအဆောက်အအုံများသို့ဖြစ်သည် >
< start="397.87" dur="6.15"> ဖြစ်နိုင်သည်ထင်ဟပ် monolithic မိုးမျှော်တိုက်မှနယူးနယ်မြေများအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြား >
< start="404.02" dur="5.39"> Selfie စွဲစွဲသူများအတွက်နံပါတ်တစ်အစက်အပြောက်ကဘယ်လောက်များများအံ့သြခဲ့သလဲ >
< start="409.41" dur="4.78"> အနှစ်တစ်ထောင်သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဓာတ်ပုံရိုက်ယူအစွန်းပေါ်တွင်ရပ်နေ၏ >
< start="414.19" dur="7.16"> ထပ်ခါထပ်ခါရှင်းရှင်းလင်းလင်း instagram မျိုးဆက်အတွက်လေးနက် pastime >
< start="482.18" dur="4.44"> ငါတို့လမ်းများကိုဖြတ်ပြီးငါတို့ဗုံးကြဲနေတဲ့ Kowloon စီးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဆင်းသွားခဲ့တယ် >
< start="486.62" dur="6"> ကမ်းခြေအထိလူအစုအဝေးကိုရှောင်တိမ်းနေခြင်း။ ကောင်းသောဒေသခံရှာဖွေတွေ့ရှိ >
< start="492.62" dur="4.29"> ကျွန်တော်တွေ့သည့်ကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုမှ ဖြတ်၍ စက်ဘီးဖြင့်အစာသည်ကျွန်ုပ်၏ခရီးစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် >
< start="496.91" dur="3.93"> မုန့်ဖုတ်အရသာကြည့်ရှုသောအရာနှင့်အတူစည်အဆိုပါစင်ပေါ်ကွာ tucked >
< start="500.84" dur="11.809"> ဒါကမာတင်ကိုသူသေချာစားနိုင်တယ်လို့ပြုံးလိုက်တယ် >
< start="517.09" dur="4.57"> မြောက်ဘက်ပိုင်းသည်ရိုးရာ Kowloon ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများပိတ်ဆို့သကဲ့သို့ဖြစ်သည် >
< start="521.66" dur="4.65"> စျေးကွက်တွေဆိုရင်နီယွန်ကငါတို့နားမလည်တဲ့အရာတွေကိုကြော်ငြာတယ်။ ငါတို့ >
< start="526.31" dur="4.17"> လူစုလူဝေးနှင့်ထူးဆန်းသောရနံ့နှင့်အသံအတွက်ယူပြီးအသွားအလာရှောင် >
< start="530.48" dur="5.18"> ဆူညံသံပြင်းထန်ပြီးဘယ်တော့မှမရပ်တန့်ပါ >
< start="540.5" dur="5.74"> ကျွန်တော်တို့ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ဆွန်းစတုရန်းပုံသဏ္builtာန်အဖြစ်တည်ဆောက်ထားတဲ့တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံတစ်ခုကိုလည်ပတ်ခဲ့တယ် >
< start="546.24" dur="6.92"> အတွင်းပိုင်း quad ကတော့ကြမ်းပြင်တွေမြင့်တက်လာတယ် >
< start="563.57" dur="4.35"> ကလေးများနှင့်အတူတကွစုပေါင်းနေထိုင်သည့်အမျိုးသမီးအုပ်စုများကကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည် >
< start="567.92" dur="4.74"> ခိုင်မာသောကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်သူတို့ကအိမ်ဖော်များဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည် >
< start="572.66" dur="5.01"> သူတို့ရဲ့ချိုးယူပြီးအထက်တိုက်ခန်းများမှတိုက်ခန်းများအလွန်သေးငယ်သောနှင့်လိုရှိ၏ >
< start="577.67" dur="4.62"> များစွာသောမိသားစုများအတွက်မျိုးဆက်သုံးဆက်ခွဲထားလေ့မရှိ >
< start="582.29" dur="4.56"> ထိုအိမ်များ၌အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများသည်မိသားစု ၀ င်တိုင်းအတွက်လုံလောက်သောအခန်းမရှိ >
< start="586.85" dur="6.21"> တစ်ချိန်တည်းမှာအိပ်ပါ >
< start="593.06" dur="4.62"> ယခု Kowloon အနေဖြင့်လေဆိပ်ဟောင်းကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ပိုက်ဆံအတွက်ဗဟိုပြေးပြေးနေသည် >
< start="597.68" dur="4.2"> ဝေးသစ်ကိုဆိပ်ကမ်းနှင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေနှင့်အတူအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်နေရာအသစ်သို့ >
< start="601.88" dur="4.62"> တောက်ပသောအဆောက်အအုံများသည်မြင့်တက်လာပြီးစူပါ၏ထင်ဟပ်ချက်များကိုထင်ဟပ်ပြသခြင်းဖြစ်သည် >
< start="606.5" dur="3.2"> ရွက်လှေကိုရေပေါ်မှာ bobbing >
< start="618.92" dur="7.099"> ဒီဟာကငါ့ဘဝမှာအထင်ရှားဆုံးမြို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် >
< start="650.81" dur="5.16"> ဒီမှာပိုက်ဆံဘဏ်တွေအာမခံကုမ္ပဏီများသည်ကြော့စျေးဆိုင်အတွက်ရွေ့လျားနေသည်နှင့် >
< start="655.97" dur="4.559"> ပန်း ဦး ရစ်သရဖူကိုအတွက်ရတနာအဆိုပါ switzy ဟိုတယ်များမှာ ritz-Carlton ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ် >
< start="660.529" dur="4.681"> အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာသည်ဤမြို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိအမြင့်ဆုံးအဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည် >
< start="665.21" dur="4.65"> ကောင်းကင်တွင်မိုးမျှော်တိုက် ၇,၀၀၀ နှင့်အမြင့်ဆုံးမိုးမျှော်တိုက်များဖြစ်သည် >
< start="669.86" dur="3.56"> ကမ္ဘာကြီး အလွန်အလုပ်များအလွန်ဟောင်ကောင် >
< start="683.04" dur="4.409"> ညစာစားပြီးနောက်အိမ်အပြင်ကိုထွက်သွားပြီး၊ >
< start="687.449" dur="4.801"> ကျိုးပဲ့နေသောဖန်မျက်နှာဖုံးများနှင့်ဖန်ခွက်များပြတ်တောက်နေသည့်ဖန်ခွက်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် >
< start="692.25" dur="4.8"> ညဥ့်အခါဆန္ဒပြပွဲဖြိုဖျက်ဥ of ၏မဆုတ်မနစ် cacophony >
< start="697.05" dur="3.899"> ကျနော်တို့အဲဒီမှာရှိနေစဉ်တက်တိုးပွားလာဆန္ဒပြပွဲများကျပန်းအားလုံးပေါ်လာ >
< start="700.949" dur="4.14"> အရပျကိုကျော် Ridley Scott ရုပ်ရှင်ထဲကနေမြင်ကွင်းတစ်ခုနဲ့တူတစ်ခုခုဒါပေမယ့်ဒီဖြစ်ခဲ့သည် >
< start="705.089" dur="5.101"> ဟောင်ကောင်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာငါတို့ဒီမှာရှိကောင်းရှိမယ်။ နည်းနည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ် >
< start="710.19" dur="3.079"> ဟောင်ကောင်အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲသွား >
< start="756.96" dur="5.069"> လူတော့ Lantau မှာတောင်ကြီးတောင်မရှိဘူး။ yeah နှင့်အချို့သောကောင်းတဲ့အမြင်များ, ဒါပေမယ့်ရဲ့ကြကုန်အံ့ >
< start="762.029" dur="3.491"> အဆိုပါလမ်းကြောင်းထွက်စစ်ဆေးပါ။ >
< start="765.52" dur="1.06"> အားလုံးကောင်းပြီဒါကိုလုပ်ကြရအောင် >
< start="776.379" dur="4.99"> ဟောင်ကောင်ကျွန်း၏အနောက်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ဟောင်ကောင်အသစ်၏နေအိမ်ဖြစ်သည် >
< start="781.369" dur="5.851"> Kong အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Lantau ကိုလည်း Disneyland ၏အိမ်အဖြစ်လူသိများသည် >
< start="787.22" dur="3.569"> ဒေသခံလမ်းကြောင်းတည်ဆောက်သူများသည် Disneyland ကိုလက်တွေ့ကျကျဖန်တီးခဲ့ကြသည် >
< start="790.789" dur="6.181"> ယနေ့တောင်တက်သမားများသည်ဤရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောလမ်းကြောင်းများနှင့်စူးစမ်းရန်ဖြစ်သည် >
< start="796.97" dur="2.689"> ကုန်ပစ္စည်းများစမ်းသပ်ပါ >
< start="851.14" dur="8.29"> ကောင်းစွာကျနော်တို့ဒီမှာအသစ်စုပ်စက်လမ်းကြောင်းကိုရိုက်ကြပြီ။ နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် ဤသည်မာတင်ဤ HM ဖြစ်ပါတယ်။ HM သည်အဓိကဖြစ်သည် >
< start="859.43" dur="4.49"> သူသည်အာရှတွင်လမ်းကြောင်းများတည်ဆောက်ရန်စင်ကာပူမှလာသူဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည် Dirt Traction တွင်အလုပ်လုပ်သောဟောင်ကောင်လမ်းကြောင်းအားလုံးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူသည် IMBA နှင့်လူရွှင်တော်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ >
< start="863.92" dur="11.08"> မင်းကိုဒီမှာရှိနေတာဝမ်းသာတယ် ဟုတ်တယ်၊ မင်းဒီကိုဘာရောက်သွားတာအံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ >
< start="875" dur="5.28"> uh ဒါကစက်ဘီးဥယျာဉ်သစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျေးလက်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ် >
< start="880.28" dur="5.22"> ဒီမှာရှစ်ကီလိုမီတာလမ်းကြောင်း, ပုဒ်နှင့်လူငယ်areaရိယာစုပ်စက်အချို့တိုးတက်သော >
< start="885.5" dur="4.001"> လိုင်းများနှင့်အဘို့အတိုးတက်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်တိုင်းပြည်လမ်းကြောင်း >
< start="889.501" dur="2.449"> မျိုးဆက်သစ်မြင်းစီးသူရဲ။ ရပါတယ် >
< start="891.95" dur="6.18"> လမ်းကြောင်းစုံတွဲတစ်တွဲစီးပြီးတော့ကျနော်တို့အလယ်၌အံ့သြဖွယ်အရက်ဆိုင်လမ်းကြောင်းကိုမြင်တော်မူ၏ >
< start="898.13" dur="6.84"> ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့စုပ်စက်လမ်းကြောင်းကိုမြင်ရတာခင်ဗျားသိတာကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် >
< start="904.97" dur="4.05"> သူတို့ကအရမ်းကိုလူကြိုက်များလာပြီ၊ အခုသူတို့ကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နေရတယ် >
< start="909.02" dur="8.44"> ဒီတော့ yeah ကကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည် >
< start="966.66" dur="5.2"> များစွာသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့များသည် Lantau အပါအဝင်ဟောင်ကောင်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည် >
< start="971.86" dur="5.13"> တောင်တက်စက်ဘီးလမ်းကြောင်းများပိုမိုတည်ဆောက်ရန်ဤareaရိယာသည်မယုံနိုင်စရာသဘာဝရှိသည် >
< start="976.99" dur="4.32"> နှင့်လမ်းကြောင်းကမ္ဘာ့အဆင့်မီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကကျိန်းသေအကောင်းဆုံးစီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကြည့်ရှုသည် >
< start="981.31" dur="6.909"> ငါတို့သည်ဤရက်သတ္တပတ်လုပ်ဖို့တယ် >
< start="1018.35" dur="5.1"> Chi Ma Ma Wan လမ်းကြောင်းရဲ့အဆုံးမှာတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖုန်မှုန့်တွေကိုငါတို့ဆေးကြောတယ် >
< start="1023.45" dur="1.97"> တရုတ်ပင်လယ် >
< start="1039.78" dur="4.409"> နံနက် ၄ နာရီတွင်နံနက်စာစားချိန်တွင်ဆန္ဒပြမှုများပိုမိုများပြားလာသည်ကိုတီဗွီတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည် >
< start="1044.189" dur="4.891"> အထူးသဖြင့်ယနေ့ငါတို့စီးရန်သတ်မှတ်ထားသောဟောင်ကောင်အလယ်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည် >
< start="1049.08" dur="4.46"> အလွန်သတိထားရန်နှင့်အစက်အပြောက်များကိုရှောင်ရှားရန် >
< start="1056.47" dur="5.2"> နစ်ခ်ဒိုဗာအားဟောင်ကောင်တစ်လျှောက်လှည့်လည်ကြည့်ရှုရန်ဒေသခံလမ်းညွှန်တစ်ခုနှင့်တွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့နီးကပ်နေပြီ >
< start="1061.67" dur="4.83"> ကျွန်းကိုငါတို့ရထားကိုငါတို့အစည်းအဝေးအမှတ်သို့သွားနေကြသည် >
< start="1066.5" dur="3.27"> အလုအယက်နာရီမက်ထရိုမဟုတ်ဘဲစွန့်ပုံရသည် >
< start="1069.77" dur="4.4"> မကောင်းသည်နိမိတ်လက္ခဏာ - နံနက် >
< start="1075.4" dur="3.69"> ဟေ့ >
< start="1079.1" dur="7.039"> နေကောင်းလား မင်းကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ မင်းကဟောင်ကောင်ကိုသွားဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ သွားကြရအောင် >
< start="1124.67" dur="5.07"> ပင်လယ်အော်အကြားတွင်ကျော်ကြားသောကြယ်ကူးတို့ပေါ်မှကြယ်တစ်လုံးရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားရှင်းပြသည် >
< start="1129.74" dur="5.01"> ဆန္ဒပြမှုများနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက်အထူးအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည် >
< start="1134.75" dur="3.17"> ဒုက္ခထဲကနေနိုင်ဘူး >
< start="1169.37" dur="3.6"> ငါတို့ဟောင်ကောင်ကျွန်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာအများကြီးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတွေ့နိုင်တယ် >
< start="1172.97" dur="4.77"> အခု yeah ဒါရဲ့ကြိုးစားရှောင်ရှားကြကုန်အံ့နှင့်မျှော်လင့်ကောင်းတဲ့လွယ်ကူသောရှာပါ >
< start="1177.74" dur="3.74"> အထွတ်အထိပ်သို့သွားသောလမ်းကြောင်းသည်ကောင်းသောဖြစ်သင့်သည် >
< start="1193.9" dur="1.52"> မာတင်သည်ဤအရာတစ်ခုကြိုးစားကြည့်ပါ >
< start="1195.42" dur="2.29"> အဲ့ဒါဘာလဲ? >
< start="1200.93" dur="4.4"> wow တစ်ခုစမ်းကြည့်ပါ ဦး >
< start="1218.86" dur="5.56"> တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင်ဘာသာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကအဓိကကျသည် >
< start="1224.42" dur="5.25"> ဥယျာဉ်၊ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးဥယျာဉ်များနှင့်ဥယျာဉ်များရှိနေရာအားလုံးတွင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသည် >
< start="1229.67" dur="5.25"> သင်တန်းရှေးဟောင်းတရုတ်ဆေးပညာ၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုများအတွက်ဒဏ္isာရီဖြစ်ပါတယ် >
< start="1234.92" dur="4.56"> လမ်းများနှင့်တောင်ကုန်းများသည်ဘုရားကျောင်းများနှင့်အလွန်သေးငယ်သောအရာများဖြစ်သည် >
< start="1239.48" dur="4.89"> ရုပ်ပုံသို့မဟုတ်ရုပ်ထုနှင့်နံ့သာပေါင်းများကိုအခြားသူများကကြီးမားပြီးပြသကြသည် >
< start="1244.37" dur="4.83"> ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအရောင်နှင့်အစဉ်အလာ၌မျက်နှာဒီအဘယ်ကြောင့်နှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပေလိမ့်မည် >
< start="1249.2" dur="5.88"> ဟောင်ကောင်မှနေထိုင်သူများသည်အသက် ၈၇ နှစ်နှင့်အမျိုးသား ၈၂ နှစ်တို့ဖြစ်ကြသည် >
< start="1255.08" dur="5.4"> နှင့်မြို့ဒါညစ်ညမ်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာရောထွေးသောအချက်ကိုရှိနေသော်လည်း >
< start="1260.48" dur="4.58"> လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူအသက်ရှည်ဘို့လှည့်ကွက်ပါဘူး >
< start="1295.169" dur="4.69"> Victoria Peak သည်ဟောင်ကောင်ကျွန်းရှိရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများရှိသောအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သည် >
< start="1299.859" dur="5.13"> အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုကျော်ပြီးဒီဟာကအလုပ်များတဲ့လမ်းတွေအောက်မှာငါတို့လမ်းကိုသွားနေတယ် >
< start="1304.989" dur="4.86"> လှေကားထစ်များနှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောလမ်းကြားများကိုရပ်နားသည့်တောင်ထိပ်များမှ >
< start="1309.849" dur="4.28"> ဟောင်ကောင်အလယ်ပိုင်းရှိ Soho ဟုလူသိများသောရပ်ကွက် >
< start="1362.73" dur="4.84"> ဒီတော့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ၊ ဒါဆိုငါတို့ထူထဲသွားပြီ >
< start="1367.57" dur="6.9"> Des Voeux လမ်းမကြီးအနောက်တစ်လျှောက်တွင်ရှိသည့်စီးပွားရေးအချက်အချာကျသောနေရာတွင်ရောက်ရှိခဲ့သည် >
< start="1374.47" dur="6"> လမ်းပေါ်မှာအပျက်အစီးတွေရှိနေတဲ့တချို့ Raptor တွေကမျက်ရည်ယိုဗုံးတွေကိုတွန်းအားပေးစေတယ် >
< start="1380.47" dur="4.74"> ဆန္ဒပြသူတွေကရဲတွေအများကြီးကိုရဲတွေလာတွေ့တယ် >
< start="1385.21" dur="4.35"> ငါအဲဒီမှာသွားဖို့ကအရမ်းပညာရှိမဟုတ်ထင်ပါတယ်မြို့၏ထိုအပိုင်းကိုကြိုးစားရှောင်ရှားပါ >
< start="1389.56" dur="5.18"> ဒါကြောင့်သူတို့ရိုက်ကူးနေတဲ့အတော်လေးလေးနက်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်ရောထွေးပါ >
< start="1394.74" dur="7.08"> ရာဘာကျည်ဆန်များသည်သူတို့ရှိသည့် SWAT အဖွဲ့ရှိသည် >
< start="1415.349" dur="4.331"> လူတွေအရမ်းပြေးနေကြတဲ့လမ်းတွေမှာအမှိုက်တွေနဲ့အမှိုက်သရိုက်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် >
< start="1419.68" dur="4.91"> လျင်မြန်စွာအဲဒီမှာကျွန်တော်အခုဒီမှာမှထွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထင်ပါတယ် >
< start="1427.78" dur="6.54"> ဒီမှာတံတားတက်သွားရအောင်၊ မစောင့်ပါနဲ့၊ သွားမသွားရဲ၊ ရဲတွေရှိနေပြီ။ >
< start="1435.24" dur="2.96"> အင်းအဲဒီမှာမသွားပါစေနဲ့ >
< start="1449.88" dur="6.01"> အနည်းငယ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစုံတွဲတစ်တွဲဘဝကသာမန်လူတွေကဆိုင်ကိုစားသောက်ကြတယ် >
< start="1455.89" dur="5.16"> ငါတို့လှပသောဆင်ဖိုနီကိုကြည့်နေစဉ်အခြားတစ်ရက်ကဲ့သို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ >
< start="1461.05" dur="6.2"> of the Lights of the မိုးမျှော်တိုက်များနှင့်ဒေသခံအစားအစာများကိုအလိုလိုက်ခြင်းကိုပြသည် >
< start="1518.16" dur="5.26"> ကျနော်တို့ Lamma ကျွန်းမှာငါတို့ဒေသခံတစ် ဦး ပြသရန်ရောက်လာရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည် >
< start="1523.42" dur="9.03"> သငျသညျန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ကို yeah လာမယ့်အဘို့အကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ရပါမည် >
< start="1532.45" dur="2.82"> အပြင်ထွက် မင်းဒီမှာဒီမှာအချိန်ပြည့်နေတယ် >
< start="1535.27" dur="10.839"> အိမ်ကနေအဆင်ပြေစွာသွားစီးနိုင်တယ် >
< start="1550.309" dur="5.31"> Lamma ကျွန်းသည်ဟောင်ကောင်နှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည် >
< start="1555.619" dur="3.75"> ကားတွေမရှိဘူး >
< start="1559.369" dur="5.01"> လူတွေကစက်ဘီးစီးတာ၊ လမ်းလျှောက်တာတွေလုပ်တာကစက်ဘီးစီးတာကိုကြည့်ရတာထူးဆန်းနေတယ် >
< start="1564.379" dur="4.11"> လူများသည်တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်၌ကူးတို့သယ်ဆောင်လာပြီးသူတို့၏မြို့တော်အဝတ်အစားများ၊ >
< start="1568.489" dur="5.581"> ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာသင်မြင်နိုင်ပါတယ် >
< start="1574.07" dur="4.169"> ကျွန်းသည်မိနစ် ၂၀ မျှကူးတို့ဖြင့်ဆွဲဆောင်နိုင်သဖြင့်သင်ဆူညံနေသောဆူညံသံကိုချန်ထားနိုင်သည် >
< start="1578.239" dur="5.88"> နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တိတ်ဆိတ်အတွက် kickback နောက်ကွယ်မှပြည်မ၏ညစ်ညမ်းမှု။ Lamma ဖြစ်ခဲ့သည် >
< start="1584.119" dur="3.87"> ထိုအချိန်မှစ၍ ဟောင်ကောင်ဒေသရှိတောင်ကြီးတောင်ငယ်၏စက်ဘီးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="1587.989" dur="4.831"> ပြီးတော့ဒီလက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်စီးနင်းနိုင်သောနေရာများစွာရှိသည် >
< start="1592.82" dur="2.39"> လမ်းကြောင်း >
< start="1676.72" dur="5.17"> ကောင်းပြီ၊ အန်ဒီ၊ မာတင်ကောင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက် Trans Hong တစ်ယောက် >
< start="1681.89" dur="8.83"> စာအုပ်ထဲတွင် Kong - စာအုပ်၌ >
< start="1697.419" dur="4.59"> Trans Hong Kong ကိုဘီယာတစ်ခွက်နဲ့ကုန်အောင်ပြီးရင်တောင်ဘက်ကနေတွေအရည်ပျော်သွားတာကိုကြည့်နေမိတယ် >
< start="1702.009" dur="8.63"> China Sea သည်မမေ့နိုင်သောမြို့ပြစွန့်စားမှုတစ်ခုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနိဂုံးဖြစ်သည် >
< start="1750.96" dur="6.929"> Starbucks သည်၎င်း၏လုံခြုံရေးနှင့်ဆန္ဒပြမှုများကိုအရှိန်မြှင့်တင်လိုက်သည် >
< start="1760.75" dur="8.85"> အိုးသင်အသစ်ကစပွန်ဆာ Carmen ရမှာဖြစ်ပါတယ် >